Nderipi nhevedzano yenguva yemabhuku eBhaibheri ▷ ➡️
Ndeipi iri nhevedzano yokuverengwa kwenguva yamabhuku eBhaibheri. Kutevedzana kwenguva kwemabhuku eBhaibheri inyaya yakaoma kunzwisisa, sezvo isiri iyo nzira yaanorongwa nayo. Mabhuku eBhaibheri akaunganidzwa nemhando dzemabhuku (mabhuku enhau, nhetembo, uporofita, tsamba), uye kwete nenhevedzano yenhau. Ichokwadi kuti mamwe mabhuku akarongwa maererano nenguva, asi hatifaniri kufunga kuti akarongwa ose, sezvo asina.
Muchinyorwa chinotevera vanoratidzwa, na nhevedzano yokuverengwa kwenguva, zviitiko zvinorondedzerwa mubhuku rimwe nerimwe reBhaibheri. Hazvinyatsozivikanwi kuti mabhuku akawanda eBhaibheri akanyorwa rini, seizvo mamwe akanyorwa nguva pfupi pashure pokunge zviitiko zvacho zvarondedzerwa, nepo mamwe akanyorwa kana kuti kupepetwa gare gare zvikuru. Nekuda kweizvi, zviri nyore kuronga mabhuku nezviitiko zvavanorondedzera . Iyi inzirawo yakanaka yekuverenga mabhuku eBhaibheri.
1 Kurongeka kwezviitiko zvemabhuku eBhaibheri
1.1 Nhoroondo mabhuku
1.2 Mabhuku enhetembo nenjere
1.3 Mabhuku echiporofita
1.4 Tsamba dzeTestamente Itsva
Kurongeka kwezviitiko zvemabhuku eBhaibheri
Kuti tizive kuti mabhuku eBhaibheri anotevedzana sei pakuverengwa kwenguva, takaita ndaza dzinotevera. Tichaona kuti mabhuku akarongwa zvinotevera:
ari nyaya dzechikuru iwo anowanikwa kumusoro kusvika achangoburwa anoiswa pazasi.
Mabhuku enhoroondo vakarongeka, zvakawanda kana zvishoma zvichitevedzana muBhaibheri, tichironda nhoroondo yevanhu vechiHebheru muTestamente Yekare nenhoroondo yaJesu uye kutanga kwekereke muTestamente Itsva.
Mabhuku ezviporofita nenhetembo vakarongeka maererano nenguva maigara maporofita kana vadetembi.
Mavara eTestamente Itsva zvakarongwa maererano nenguva yazvaive zvichida zvakanyorwa.
Tinofanira kurangarira pakuverenga mabhuku eBhaibheri kuti, mumabhuku akasiyana, zviitiko zvinogona kudzokororwa zvakaitika panguva imwe chete kana kutaura nyaya dzinodzokororwa.
Zvadaro, tichanyora zvose mabhuku enhoroondo achitevedzana umo nhoroondo yavanhu veIsraeri inorondedzerwa.
Mabhuku aya ndeaya:
Mabhuku enhetembo nenjere
Muchikamu ichi tinowana mabhuku mashanu. Ndizvo zvinotevera:
Aya mabhuku 17 anoodha nenguva iyo avo maporofita kana vadetembi vaive vapenyu.
Tsamba dzeTestamente Itsva
Pakadaro tinogona kutaura izvozvo kurongeka kunoteverwa ndiko kunyorwa kwaro. Pakutanga ndiyo yekutanga yakanyorwa, uye pakupedzisira, ichangopfuura.
Tinovimba unotoziva chii chiri nhevedzano yokuverengwa kwenguva yamabhuku eBhaibheri kutenda kuchinyorwa chedu. Kana iwe uchida kuenderera mberi nekuwana rumwe ruzivo rwekufarira senge Ndezvipi zvisimbiso zvinomwe zveapocalypse, garai mukati chemada.online uye usarasikirwa neruzivo.